Resipeo an'ny Voanjo Voanjo Reese an'ny Homeseade Reese - Fomba Fanamboarana
ahoana no hanafahako voajanahary vilany eo noho eo
ahoana no anaovako pitipoà voasarimakirana
wedges ovy amin'ny fryer amin'ny rivotra
inona no hotompoina amin'ny hoditra ovy
ny fomba fikolokoloana manapaka ham
Resipeo saka saka: Reeses Voanjo dibera
Tena mahavariana ireo! Nataoko ho fanomezana ho an'ny vadiko ireto Kopy Voahangy Voanjo Cat Reese ireto ho an'ny vadiko .. saingy mazava ho azy, tsy maintsy nizaha toetra iray aho. Ok, roa .. Nizaha toetra roa aho. Ary avy eo dia nomeny iray aho… hizara. Ary avy eo nangalatra iray aho… fa mbola be ny sisa tavela ho azy!
Na izany na tsy izany, ireo dia tena mora azo na dia maharitra fotoana fohy aza. Nivoaka tamin'ny fomba kanto ny vokatra farany ary faly erỳ aho nanome azy ireo! Nampiasa sôkôla ronono faran'izay tsara aho izay vao nanampy ny fihenan'ireo kaopy dibera voanjo ireo. Azonao atao ny mampiasa sôkôla mainty na sôkôla sôkôla raha toa ka izay no anananao!
Repin Kopia Voanjo Voanjo Voalavo Cat Reese Eto
Ankafizo… na dia mieritreritra aza aho fa tsy mila milaza izany aminao! )
Entana ilainao amin'ity fomba fahandro ity:
* Totom-boanjo * Chocolate ronono * Bobongolon'ny dibera voanjo *
Kaopy dibera Reeses Voanjo
Fotoana fanomanana5 minitra Fotoana fandrahoan-tsakaforOA minitra Fotoana manontolo7 minitra Fanompoana24 kaopy dibera voanjo MpanoratraHolly Nilsson Tena mahavariana ireo! Nataoko ho fanomezana ho an'ny vadiko ireto Cupcat Peeseut dibera an'ny Copycat Reese ireto .. saingy mazava ho azy fa tsy maintsy nizaha toetra iray aho. Ok, roa .. Nizaha toetra roa aho. Ary avy eo dia nomeny iray aho… hizara. Ary avy eo nangalatra iray aho… fa mbola be ny sisa tavela ho azy! pirinty Pin
▢¾ farantsanao Sôkôla mainty na ronono misy kalitao tsara
▢1 kapoaka dibera malama na chunky (Malama tsara aho)
▢1 kapoaka siramamy vovoka
▢⅓ kapoaka graham crumbs
▢bobongolo kaopy dibera (azo jerena ihany koa amin'ny magazay amin'ny asa-tanana)
▢NA taratasy muffin / cupcake
Afangaroy ny sôkôla amin'ny herin'ny 50% ao anaty ny micro mikisaka isaky ny 30 segondra. Tsy tokony hatsonika tanteraka ny sôkôla, satria hipetraka ny sombin-javatra kely dia hitsonika. Mitandrema tsara sao hafanana be ny sôkôla sao hahazo azy.
Apetaho amin'ny sotrokely sôkôla isaky ny lavadrano na muffin kaopy amin'ny lamosin'ny sotro, 'sintomy' ny sôkôla amin'ny sisiny mba ho voasarona tanteraka ny ambany sy ny lafy.
Apetraho ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 30 segondra mba hanamafisana ny sôkôla ary afaka 'misintona' bebe kokoa ianao na mameno izay banga rehetra. (Notazonina ho maivana ilay lasitra nataoko ary mora ny mahita toerana manify ny sôkôla)
Avereno ao anaty vata fampangatsiahana mandra-hatsiaka
Afangaro ao anaty vilia ny dibera voanjo, ny siramamy vovoka, ny sira ary ny potika graham
Mikraoba eo amin'ny 90 segondra eo ho eo mba hanalefaka ny fangaro ary avela handraraka.
Apetraho ao anaty lava-drano ireo sotro fihinan'ny dibera 1 sotrokely, tapaho moramora na ahintsana mba hikosehana azy.
Atao ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 5 minitra
Sotro sôkôla ampy eo ambonin'ilay dibera voanjo handrakofana azy ary ahintsana na kitiho ny bobongolo / kaopy mba hialana amin'ny tampony
Teny lakileKôpim-boanjo voanjo an'ny Copycat Reese Mazava ho azyDessert, Snack masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Ireto misy fomba fahandro hafa tianao
* Lasagna dibera voanjo * Cookies an'ny dibera vita amin'ny sôkôla roa sosona * Rolo Cheesecake *